Hogaan Iyo Horumar Q 1aad: Waa Maxay Hogaamin (Maxamed Adam Xassan) | Cabays.com
Hogaan Iyo Horumar Q 1aad: Waa Maxay Hogaamin (Maxamed Adam Xassan)
May 20, 2019 - Written by Cabays
Cabays Media ( Aragti- Rayi) – Waxaan salamayaa Shacabi weynaha waxanan ku salamaya salaanta islaamka ASC, waxanan idin leyahay Akhris wanaagsan.
Hogaamin waa nidaam Horumar ku saleesan iyo waxqabad bulsho iyo Horumar u dalgaadho ama shirkada amaba urur IWM oo u Gadh wadayn ka yahay isla HogaamiyAHA dajiyey nidaamka hogaaminta O leh hadaf iyo han cad isla markaana la gaadhi karo dhawaan.
Hogaamintu waa nidaam wanaagsan hadii la helo dhaqaajiye wanaagsan oo ah hogaamiye Heer sare ah waxa una ka qayb qaata dibu dhiska dajinta qorshaynta hawlaha hadba la fulinaayo iyo kuwa la dajinaayo waa hab heer sare ah o hadii u shakhsiga hogaamiyaha ah u fahmo wax walba hagaagayaan o xataa hadii wax aan suurta galin Karin ay noqonoyaan wax suurta gala idinka ilaahay.
Hogaamintu Hadii loo doorto qof leh astaamo Hogaamineed waxa saxa oo hubaala in la Gaadhayo Horumaro Heer sare ah ku waas o ay u maddu ama shirkadi ku tanaado isla markaana ku Gaadho figta sare e horumarka isla markana ay noqdaan Dayax Iyo shamac Ka Dhex iftiimaya Khayr Kood o ay Tar tan kula jiraan.
Qore Maxamed Adaan Xasan
Hogaan & Horumar.
Cabays Media marnaba kama masuul aha aragtida dadyowga kale. Qoraalka kor ku xusan waa mid xambaarsan aragtida qoraha, mana mid ma tasha ta Cabays Media. Hase ahaatee waxa soo dhaweynaynaa is dhaafsiga raga tihaya haka duwan.